Nagarik News - तपाईँको सास गन्हाउँछ ? यसो गर्नुस्
डा. प्रकाश बुढाथोकी, वरिष्ठ दाँत तथा मुख रोग विशेषज्ञ, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, बुटवल - मोजा, काखी र सास गन्हाउने व्यक्तिगत समस्या हुन्। तैपनि यो समस्याले अरुलाई अप्ठ्यारो पार्छन्। मोजा गन्हाएमा धोएर, सफा गरेर वा जुत्ता नै बदलेर समाधान गर्न सकिन्छ। तर, सास गन्हाउँछ भन्दैमा मुख नखोली बस्न सकिँदैन। सास गन्हाउने समस्याले आफूसँग हिँडडुल र उठबस गर्ने साथीसंगीलाई हैरान पार्नुका साथै स्वयं व्यक्ति पनि हीनभावनाले ग्रसित हुनसक्छ। त्यसैले यो रोग आफू र अरुका लागि पनि समस्या हो भनेर चिनिन्छ।
मुख वा नाकबाट अपवित्र वा अशुद्ध, नराम्रो, मन नपर्ने गन्ध आउने अवस्थालाई हेलिटोसिस वा ब्याड बे्रथ वा सास/मुख गन्हाउने रोग मानिन्छ। सास गन्हाउने अवस्था आफैंमा रोग नभई यो सामान्य अवस्था वा शरीर तथा मुखमा भएको रोगहरूको लक्षण वा औषधी प्रयोगको असर हुनसक्छ। त्यसकारण सास गन्हाउने अवस्थाले शरीरमा भएका अन्य रोगहरूको जानकारी दिएर 'मुख शरीरको ऐना हो' भन्ने भनाईलाई पनि चरितार्थ गर्छ।
(४)थुक कम आउने अवस्था– थुक निकाल्ने ग्रन्थीहरूको रोग, क्यान्सरको उपचार, औषधीको प्रयोगले थ¬क कम आई सास गन्हाउन सक्छ।
१. यदि तपाईंलाई रुघा लागेको छैन र नाक ठीक छ भने आफ्नो हात मुख अगाडि राखेर त्यसमा सास फेर्नुहोस्। हातमा ठोक्किएर फर्केको सास नाकले भित्र तानी हाल्नुहोस्। यसबाट तपार्इंले आफ्नो सास गन्हाएको वा नगन्हाएको थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।
उपरोक्त तरीकाबाट सास गन्हाएको वा नगन्हाएको पत्ता मात्र लाग्छ। तर, कति भनेर नाप्न ब्रेथएनालाइजर लगायत उपकरण प्रयोग गरिन्छ।
अन्तमा, सास वा मुख गन्ध आउने अवस्थालाई एक अर्काको पर्यायको रूपमा लिए पनि यदि व्यक्तिको नाक ठीक छ र श्वासप्रश्वास प्रक्रिया नाकबाटै हुन्छ भने सास वा नाक गन्ध आउँदा शरीरका प्रणालीसँग सम्बन्धित कारणले हुन्छ। मुखबाट गन्ध आयो भने मुख र घाँटीसँग सम्बन्धित कारण हुने भएकोले सम्बन्धित रोग विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ। अस्थायी रूपमा सास गन्हाउने समस्यालाई चुइङ्गम, माउथवास, ल्वांग सुकुमेल चपाएर रोक्न सकिन्छ। चिकित्सकलाई जचाएर रोगको कारण पत्रा लगाई उपचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।